कति मिच्यो भारतले ६२ वर्षमा नेपाली भूमि « Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest
वेलायत बन्ददेखि नेपाल बन्दसम्म र कर्तब्य बोधको प्रश्न »
भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५४ भन्दाबढी ठाउँमा नेपाली भू-भाग मिचिएको छ । भारतसँग जोडिएका चार जिल्लाहरु महोत्तरी, धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमणबाट चोखा रहेका छन् । भारतबाट एकतर्फी रुपमा लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी पछिल्लो दाङ र बाराबाहेक भूभाग मिचिएको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र मेची-महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा ४ सय ७४ सीमास्तम्भ भारतीय पक्षबाट गायब भएका छन् । सशस्त्र प्रहरीबलको तथ्याङ्कअनुसार ३ हजार ५ सय २९ सीमास्तम्भमध्ये २ हजार ३ सय ५८ मात्र सामान्य अवस्थामा छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा संविधानसभा राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष अमिक शेरचन भर्खरै भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलले दाङमा गरेको ज्यादतीको अवलोकन गरेर फर्किए । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले दाङमा सीमा अतिक्रमण नभएको दावी गरेकी थिइन् । त्यसलाई खण्डन गर्दै शेरचन भन्छन्- “दाङको कुनै पनि सीमास्तम्भहरु यथास्थानमा छैनन् । जङ्गे पिलरहरु छैनन् । अनौठाखालका पिलरहरु सिमानामा भेटिए ।” यस विषयमा वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि सहमत छन् । सन् १९८१मा नेपाल-भारत संयुक्त सीमा समिति गठन भएर त्यसले २००७ डिसेम्बरमा आपुनो काम सकेको बताउँदै उनी भन्छन्- “तर त्यसमा पनि विवाद कायमै छ । सो समितिले ९८ प्रतिशत सीमाङ्कन गरेका दावी गर्दै १८२ थान नक्सा बनाएको दाबी गरेको छ तर त्यो सरकारी स्तरमै गोप्य राखिएको छ । ” गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले समेत सीमा विवाद रहेको स्वीकार गरेका थिए । अर्का सीमाविद् फणिन्द्र नेपाल अङ्ग्रेजले भारतलाई उपनिवेशबाट मुक्त गर्दा नेपालको भूमि पनि मुक्त गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन् “नेपाल सरकारले यस मुद्दालाई सार्क आसियान र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्न सक्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान पनि सकिन्छ । ” सुगौली सन्धिबाट गुमेको एकतिहाई भूभाग फिर्ता गर्ने सवालमा नेपालको यस्तो तर्क रहेको हो । सन् १९४७ सालमा स्वतन्त्र भएदेखि भारतले नेपालको भूमि लगातार अतिक्रमण गरिरहेको छ । भारतले १ लाख ४३ हजार वर्गकिलोमिटर नेपालको क्षेत्रफल भएको नक्सा बनाएको सीमाविद् नेपालको दावी छ । सुगौली सन्धिपछि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा सीमित भएको थियो । सुगौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४ हजार ६ सय १६ वर्गकिलोमिटर थियो । नेपाल र भारतबीच १८ सय ८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ त्यो पनि सीमाभन्दा ३-४ किलोमिटर भित्र मात्र । भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका चितवन दाङ र पहाडका इलाम पाँचथर ताप्लेजुङ डडेल्धुरा बैतडी र दार्चुलामा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षाका लागि कुनै सशस्त्र फोस्र तैनाथ गरिएको छैन । उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको १४ सय १५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । ती नाकाहरुमा नेपालले सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएको छैन । भलै चीनसँग नेपालको सीमा समस्या हल भइसकेको छ ।
भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा बाक्लो सीमा सुरक्षाबल तैनाथ गरेको छ । नेपाल भारत सीमामा भारतले ४५ हजार सेना तैनाथ गरेको छ । अर्थात् प्रत्येक एक किलोमिटरमा २५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । भारत र नेपालका बीचमा ८ हजार ५ सय र चीनसँग जोडिएका करिब १ सय सीमास्तम्भहरु छन् । तर ती सीमास्तम्भहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी नेपाल सरकारलाई छैन । सीमाको सही व्यवस्थापन गर्न र भारतीय बसाइसराई रोक्न नेपाल-भारत सीमारेखामा काँढेतार लगाउनुपर्छ भन्ने सीमाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । सीमाविद् फणिन्द्र नेपाल भन्छन् “काँढेतार लगाउने हो भने भारतीय डकैतीबाट पनि नेपालीहरु सुरक्षित हुने थिए । ” अझ परिचयपत्रका आधारमा मात्र सीमामा आवत-जावत गर्दा उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् ।
भारतीय अतिक्रमणमा परेका जिल्लाहरु
टिम्बापोखरीः यस क्षेत्रको डाँडामा भारतले िस·लीला पार्क बनाउँदा काचनजङ्घा दक्षिण १५ किलोमिटर धसो्र मिचिन पुगेको छ । मगना तम्लिङः पूर्वी खण्डमा भारतले नेपाली सीमा मिचेको छ । काबेली-काब्रुः काचनजङ्घा हिमालको दक्षिण काब्रु क्षेत्रका डाँडामा शिखर चढ्न पर्वतारोही जाने सिलसिलामा भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो दावी गर्दै आएको छ ।
च्याङथापु-सि·लीलाः भारतीय सेनाले नेपाली भूमि प्रयोग गरिरहेको छ । तिब्बु पोखरी क्षेत्रमा सीमा यकिन हुन नसक्दा पशुपालनको समेत समस्या छ । चिवाभाज्याङ-सि·लीलाः भारतले यस क्षेत्रको सीमारेखामा जोडेर राष्ट्रिय निकुाज बनाएकाले फलेलुङसम्मको नेपाली क्षेत्रको डाँडाको भाग समेत सो पार्कमा गाभेको छ ।
पशुपतिनगर-हिलेः पशुपतिनगरको फाटकस्थित नेपाली दशगजा क्षेत्रमा भारतले भन्सार कार्यालय भवन बनाउन ४० वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि मिचेर काँढतार लगाएको छ । पशुपति-४ हिलेमा २०५९ असार २४ मा गाडेको ४ सीमास्तम्भमध्ये ७१÷२२ नम्बरको सहायक स्तम्भका कारणले नेपालीको ६ घर एवं एउटा छोटी भन्सार कार्यालयसमेत भारतमा परेको छ । मानेभन्ज्याङः यस क्षेत्रमा सीमा मिचिएको बारेमा नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सन्दकपुरः ३३ ३६३ मिटर अग्लो यो डाँडोबाट काचनजङ्घा र दक्षिणमा तराई भूभाग देखिने हुनाले भारतले यहाँ ३२ किलोमिटर सडक बनाई सिमाना मिचेको छ ।
पाठामारी महेशपुर भद्रपुर काँकडभिट्ट नकलबन्दा बाहुनडाँगी क्षेत्रमा भारतले ३२ हजार रोपनी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ ।
बुद्धनगर-जोगवनीः जोगवनी सिमानामा दशगजा क्षेत्र नै देखिँदैन । नेपाली भूभाग बुद्धनगर पोखरिया र·ेली डाइनिया सोराभाग मझारे गाविसका दशगजा क्षेत्रमा भारतीय आप्रवासीहरुले सार्वजनिक र नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । र·ेली-चेप्राहाः र·ेली सहित आमगाछी झुर्किया महादेवा र कसर्िया सीमाक्षेत्रको नेपाली दशगजामा भारतीय नागरिक बसोबास गरेका छन् । बझाह लुना नदी-चुनिमाडीः नजिकको नेपालपट्टीको बरड·ाको एक किलोमिटर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
सुनसरी जिल्लाभित्रका कटैया-भन्टावारी हर्निगरिया साहेवगन्जजस्ता ठाउँहरुमा गरी भारतले सात हजार विघा नेपाली जमिन मिचेको छ ।
सुवर्णपट्टीः यस क्षेत्रमा ५० मिटर सिमास्तम्भ नेपालभित्र सारिएको छ । जसका कारण ६० विघा जमिन भारतबाट अतिक्रमण भएको छ । सखडा छिन्नमस्ताः भगवतीभन्दा दक्षिण बरामपुरछेउको जग्गा भारतीयहरुले उपयोग गरिरहेका छन् । लालपट्टी-गोविन्दपुरः लालपट्टीमा ५०-१०० मिटरसम्म जङ्गे स्तम्भ सारी नयाँपिलर गाडिएको छ । दशगजाभित्रको करिब ५० विघा नेपाली जमिन अतिक्रमण भएको छ । कुनौलीः भारतीय रेल्वे स्टेसनतर्फ जाने सडक दक्षिणतर्फ करिब ५ किलोमिटर सीमा क्षेत्रको नेपाली जग्गा अतिक्रमण हुँदा ६० बिगाह जमिन मिचिएको छ । विष्णुपुर-शिवनगरः गोबरगाढा क्षेत्रमा भारतीय किसानहरुले ठाउँठाउँमा नेपाली जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।
माडर-चन्द्रगन्जको दक्षिणी भूभाग र टाँडीको दशगजा क्षेत्रभन्दा भित्रको जमिन भारतले मिचेको छ ।
त्रिभुवननगरः सीमास्तम्भ नं। २९ र ३० देख्नै नसकिने गरी ४३ जना भारतीयहरुले नेपाली दशगजा क्षेत्रदेखि २०० फिटभित्र नेपाली भूमि मिची सिसौका रुख लगाएका छन् । सीमास्तम्भ नं। ३५ ३८ र ३९ छेउछाउ नेपाली भूमि मिची भारतीयहरुले २९ घर बनाएको र यस्तै स्तम्भ नं। २८२९३० वरपर २० घर स्तम्भ नं। २५ २६ छेउ ११ घर बनाई सिमा मिचिएको छ । सङग्रामपुर-हथिऔलः पूर्वमा सङग्रामपुर र पश्चिममा हथिऔल गाविसहरुको दशगजाभित्रको नेपाली जग्गा विगत २० वर्षदेखि भारतीयहरुले उपयोग गर्दै आएका छन् ।
गौर-जमुनाः जमुना गाविसको वडा नं। ८ को दक्षिण भागमा भारतीयहरुले वृक्षारोपण गरेर रुखहरुको उपयोग गरिरहेका छन् । गौरनजिकै भारतीय क्षेत्रमा बाँध बाँधिएको हुनाले वर्षामा बाढी र डुबानबाट नेपालीहरु पीडित छन् ।
ठोरीः यस क्षेत्रमा भारतीयहरुले पुराना सीमास्तम्भ नं। ८४ र ८५ हटाई भिकना ठोरीतर्फबाट नेपालतर्फ ५०० मिटर सिमाना सारी नेपाली भूमि मिचेका छन् । लक्ष्मीपुर-पिपराः यस क्षेत्रमा पनि चोक्टाचोक्टी सीमा अतिक्रमणमा परेको छ । वीरगाज-सिसर्ियाः अलौ तथा सिक्टा क्षेत्रमा नेपाली दशगजा भारतीय नागरिकहरुले मिचेका छन् । वीरगन्जको सिसर्ियामा भारतले वाणिज्य कन्सुलेट अफिस र भन्सार कार्यालय नेपाली भूमिमा बनाएको छ । रक्सौलमा नेपाली स्वामित्व भएको जमिनमाथि भारतीयहरुले अतिक्रमण गरेका छन् । रक्सौलमा नेपाल सरकारले रेल्वेका लागि १९२४ जुन २९ मा भारु ३२ हजारमा किनेको २७।७१ एकड १६ विगाहा १० कठ्ठा जमिन भारतीयहरुले एकपक्षीय रुपमा हडप्न थालेका एक दशक नाघेको छ ।
बाल्मीकि आश्रमक्षेत्रको जङ्गलमा बेलामौकामा भारतीयहरुले अतिक्रमण गरी रुखसमेत काटी लैजाने गरेका छन् । दारनाला दारीचुरेः यस क्षेत्रको भूभागमा भारतीय पक्षले वर्षेनी अतिक्रमण गर्दै आएका छन् ।
सुस्ता नसा्रही क्षेत्रः सुस्ता क्षेत्रमा २०११ सालभन्दा अघिदेखि भारतीयहरुले नेपालतर्फको जङ्गलको भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसपछि नारायणी नदीले धार बदलेपछि भने नेपाली भूमि मिचिने क्रम अझ बढेको छ । यो सर्वाधिक पुरानो विवादित भाग हो । सुस्ता-नसा्रही क्षेत्रको करिब २१९५० विगाह जमिन भारततर्फबाट मिचिएको छ । यस्तै घोङखीनाला नजिकको दशगजा क्षेत्रमा पनि विवाद कायम छ ।
दानवनदी क्षेत्र रसियावाल खुर्दलोटन बाँधः नेपालको मर्चावार क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नं। ३० सँगै सटाएर भारतले ३ किलोमिटर लामो रसियावाल खुर्दलोटन बाँध बनाउनाले मालिगाव थुमुवा पिप्रवा असुरनैया बेचकुइया रोइनिहवा फेरना सिलौटिया बोगडी सिवुवा अमा बभनी गाविसहरुको धानखेत डुबानमा परी करिब २० किलोमिटर दशगजा मिचिएको छ । यसबाट गौतमबुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी पनि डुबानमा पर्ने खतरामा छ । सुनौली नाकाः बेलहिया सुनौली नाकाको नेपालतर्फको दशगजा क्षेत्रमा भारतीयहरुले अनधिकृत झुपडी र पानी टयाङकी बनाई सीमा अतिक्रमण गरेका छन् । सुनौली सीमाक्षेत्रभन्दा ९।१ मिटर नेपालभित्र परे
को भारतीय प्रहरी थाना पनि हालसम्म हटाइएको छैन । कपिलवस्तु कृष्णनगर ठन्डानदी किनारको दशगजाको दुवै भागमा भारतीयहरुले घर बनाएकाले नेपाली दशगजा क्षेत्र हरण भएको छ । यस्तै ठन्डा नदीले काटी दशगजाको भाग मेटाएको छ ।
दाङ कोइलाबासः सिवालिक श्रृङ्खलामा रहेको कोइलाबास क्षेत्रमा भारतीयहरुले साविक सीमाभन्दा उत्तरपूर्वसम्म भारतको पर्छ भनी केही भाग मिचेका छन् । हर्नाडाँडा क्षेत्रमा चुरे फेदीको सिमानालाई उत्तर सारी श्रृङ्खलाको सिमाना सारिएको छ । दाङको डुडुवा श्रृङ्खलामा अङ्ग्रेजकै पालादेखिको विवाद थियो ।
सन्तलियाः ठाउँ-ठाउँमा दशगजा मिची भारतीयहरुले घर बनाएका छन् । होलिया-नैनापुर लक्ष्मणपुरबाँध :राप्ती नदी क्षेत्रको दोराचुरे एवं होलिया गाविस वडा नं. ९ सन्तलियादेखि दक्षिणतिर दुई देशबीचको सीमारेखादेखि र सीमास्तम्भ नं। १९ देखि करिब ३०० मिटर टाढा भारतले २०५६ सालमा राप्ती नदीमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध तथा तटबन्धबाट बाँकेको बेतहनी होलिया फत्तेपुर गंगापुर मटेहिया नैनापुरसमेत गरी ९ गाविसको खेतबारी र धनजन डुबानमा परेको छ । भारतले लक्ष्मणपुर बाँध र २२ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्नाले दुई देश बीचका सीमास्तम्भहरु लोपभएका छन् । नेपाली भू-भाग जलमग्न भएको छ ।
मनउ, खैरी र टपरा क्षेत्रको ठाउँ ठाउँमा दशगजा मिचिएको छ । गुलरिया नगरपालिका-१२ मा दशगजामा १ किलोमिटर खाडल खनी टपरी गाउँको सीमास्तम्भ नं. ६२/६ देखि ६२/८ सम्म १ किलोमिटर भूभाग भारतले मिचेको छ । बर्दिया जिल्लाको करिब ६० किलोमिटर नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रको स्तम्भ नं। ४१ देखि ९८ सम्मका प्रायः जसो दशगजाको भूभाग भारतीय पक्षबाट खेतयोग्य जमिन बनाइएको छ । मूर्तियाः बर्दियाबाट मुर्तिया जाने बाटोको बासी क्षेत्रमा केही जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । मानपुर-भीमापुरः नकुवा नालादेखि उत्तरतर्फको क्षेत्र मिचिएको छ । कैलाली सती-विरानाला-भानालाः यस क्षेत्रमा सीमास्तम्भहरु लोप भएका छन् । दशगजा भन्दा केही भित्री भाग पनि मिचिन पुगेको छ । यस्तै फूलबारी गाविस नजिकको भागमा मोहना नदीले आफ्नो बहाव बदलिरहने कारणले यस आसपासको जङ्गल भारतीयहरुले अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । भजनी कुसुमघाट र लालबोझी कौवाखेडा को सीमास्तम्भ नं। ११० ११५ १२३ नेपालतर्फ सारेर २० मिटर चौडा १५ किलोमटिर लामो नेपालको करिब ५०० बिघा जमिन २०६३ पुस १० देखि मिचिएको छ ।
ब्रम्हदेवमण्डि-पुर्णागिरीः ब्रम्हमदेवमण्डिमा रहेको सीमास्तम्भ नं। १ बगाएपछि केही नेपाली भूमि अतिक्रमित हुन पुगेको छ । टनकपुर ब्यारेज तथा डुबान क्षेत्रः यस भागमा करिब २२२ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको छ । भारतले टनकपुर बाँध निर्माणसँग सम्बन्धित ५७७ मिटर लामो पुल बनाउँदा नेपालतर्फको जमिन मिचिएको छ । बनबासा-गड्डाचौकीः यस क्षेत्रमा नेपालतर्फको भूभाग भारतीय बासिन्दाले क्रमशः मिच्दै आएका छन् । लक्ष्मीपुर रामपुर बिलासपुर चाँदनी दोधाराको पूर्वी भाग मेलाघाट तथा सुन्दरनगर क्षेत्र त्रिभुवनबस्ती बेलडाँगी गाविस दशगजाभित्रको ठाउँठाउँमा गरी करिब ३० बिघा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी भारतीय नागरिकहरुले २६ वर्षदेखि उपयोग गर्दै आएका छन् । शारदा ब्यारेजक्षेत्रः भारतबाट शारदा बाँध निर्माण गर्दाका समयमा ३६।६७ एकड २९१।७ रोपनी जमिन साबिकदेखि नै मिचिएको मिचिएकै छ । शुब्लाफाँटः शुक्लाफाँट बन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको दक्षिणको सीमारेखाको २० लाइन किलोमिटर क्षेत्रको ठाउँ-ठाउँमा २९ वर्गकिलोमिटर भूभाग मिचिएको छ । परासन-खुड्डाकड्ढडः परासन गाविसको वडा नं। ९ को खुड्डाकड्ढडमा अवस्थित सीमास्तम्भ नं। १९७ लाई रिफरेन्स पिलर बनाउँदै १५० मिटर चौडा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ । यस क्षेत्रमा भारतीय ठेकेदारहरु घुसेर काठ काटी लैजाने गरेका छन् । त्रिभुवनबस्ती गाविसदेखि ब्रम्हदेवमण्डीसम्म नेपालभारत सीमाक्षेत्रका सीमास्तम्भहरुमध्ये १२ वटा हराएका र १० वटा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
ा कालापानी-लिम्पियाधुराक्षेत्रः यो क्षेत्रमा नेपाल र भारतबाट चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतको ताक्लाकोट व्यापारिक केन्द्रतर्फ जाने लिपुलेक भन्ज्याङदेखि शुरु भई व्यास गाविस वडा नं। १ मा पर्ने साविक तुल्सीन्यूराङ नाभिडाँड हाल कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिकले ओगटेको भाग हुँदै यसदेखि अझ पश्चिमतर्फका गुन्जी कुटी नाभी छोटाकैलाश जोलिङकाङ पर्वत हुँदै लिम्पियाधुरासम्म पुगेको छ । कसरी सुल्झियो चीनसँगको सीमाविवाद सीमाविद्हरुका अनुसार उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको सीमा विवाद छैन । सन् १९६० मा चीन र नेपालका बीचमा सीमा सम्झौता भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् १९६१ मा सीमा सन्धि गरियो । त्यसबेलासम्म नेपाल र चीनका बीचमा मुस्ताङ टिङकर लार्केभन्ज्याङ गौरीशङ्कर हिमाल किमाथाड्ढाजस्ता ३२ ठाउँमा सीमा विवाद थियो । सीमाड्ढनपछि सन् १९६२ मा भने जमिनमा सीमा खम्बा गाड्ने काम भयो । सगरमाथामा पनि चीनले दाबा गरेको थियो । सगरमाथाबाहेक अरु विवाद तल्लो प्राविधिक तहबाट हल गरियो । सगरमाथाको मामिला भने प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट समाधान गरिएको थियो । नेपालले दाबी गरेका ठाउँहरुमा चीनले दस्तावेजका आधारमा सहजै छाडिदिएको थियो । चीन र नेपालको बीचमा पानीढलो सिद्धान्तको आधारमा सीमाड्ढन भएको थियो । त्यसबेला लिने र दिने सिद्धान्त पनि अपनाइएको थियो । जसको कारण सीमा विवाद चाँडो समाधान भयो । यस्तो संवेदनशील कुरालाई ध्यानमा राखेर सौहादपूर्ण तरिकाले सीमाड्ढन समस्या समाधान भएको थियो । तर सगरमाथाको समस्या भने दुई देशका सरकार प्रमुखका बीचमा दस्तावेजका आधारमा छलफल गरी समाधान गरिएको थियो । तत्कालिन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले २०१७ साल बैशाखमा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँ र नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाका बीचमा सगरमाथाको विषयमा छलफल भएपछि बैशाख १६ गते सिंहदरवारको ग्यालरी बैठकमा चाउ एन लाइले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । सो सम्मेलनमा उनले भनेका थिए -“नेपालका प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले हामीलाई दिएको तथ्याड्ढलाई चीनले राजनीतिक कूटनीतिक र प्राविधिकरुपमा अध्ययन गर्दा चीन सरकार यो निर्णयमा पुग्यो कि वीपी कोइरालाले दिएको नक्सा जायज छ । त्यसैले सगरमाथा हामीले नेपालकै हो भनेर निर्णय गरेका छौँ । “चाउ एन लाइको त्यो भनाइबाट एकाएक सगरमाथा समस्या हल भएर गएको थियो । यद्यपि सङ्खुवासभाको उत्तरी दुईवटा गाउँ च्या· र लेन्दुप परापूर्व कालमा नेपालको थियो । तर तयो सीमाड्ढनको बेलामा चीनतर्फ पारियो । त्यसबेलाका कर्मचारीले दस्तावेज अध्ययन गर्न नसकेको हुनुपर्छ । या त अन्य कुनै कारणबस ती गाउँहरु चीनतिर पर्न गए । त्यहाँका जनताले मालपोत कहिले नेपालतर्फ त कहिले तिब्बततर्फका जिम्माललाई तिर्थे । हुँदा-हुँदा त्यहाँका बासिन्दाले दुवैतर्फ मालपोत तिर्न छाडेका थिए । नेपालका लागि पूर्व चिनियाँ राजदूत योङले कालापानी सीमा विवादका बारेमा एक कार्यक्रममा प्रतिकि्रया दिदै भनेका थिए- “नेपाल र चीनका बीचमा सिमाड्ढन गर्दाको समयमा कालापानी नेपालकै हो । यद्यपि त्यसबेलामा नेपालको सिमाना पश्चिमको लिम्पियाधुरासम्म पुगेको थियो । त्यो ऐतिहासिक दस्तावेजलाई बेवास्ता गरियो ।”
This entry was posted on January 11, 2010 at 12:13 pm	and is filed under Article, लेख/ रचना /निबन्ध. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.